အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့! အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် | slot Fruity £5+ £ 500 အခမဲ့!
Min Dep £20, Max Bonus 600 bonus spins, 1st,8ကြိမ်မြောက်,15ကြိမ်မြောက်,22ကြိမ်မြောက်,29သြဂုတ်လကြိမ်မြောက်, Max 30 သိုက်, Cleopatra only, 6-10px,30x ကအာမခံ, 4x Cap. Full T&Cs apply
slot Fruity ကာစီနိုသည်သင်၏တံခါးမှပျော်ရွှင်နာရီအတွင်းအင်္ဂါနေ့မှာမိမိတို့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံမှာလီယိုပတ်ထအထိုင်ကစားကြီးမားသောအနိုင်ရမယ့်အံ့သြစရာအခွင့်အလမ်းတတ်၏. အဆိုပါပျော်ရွှင်နာရီကနေစတင်ပါ 18.00 သို့ 22.00 BST. တစ်ဦးရှိပါတယ် 20 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများသြဂုတ်လတစ်လအတွင်းမှာတစ်ဦးချင်းစီကအင်္ဂါနေ့တွင်£ 20 ၏ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်ပူဇော်. ဒါပေမယ့်သတိရ, သင်တစ်ဦးအချိန်ကတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေနှင့်အတူဆော့ကစားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီ.
အဆိုပါ အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် သင်သည်မည်သည့်အရည်ငွေရှာနိုင်မီမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ခံရဖို့ရှိသည်သေချာအာမခံလိုအပ်ချက်နှင့်တကွကြွလာ. သင်သည်မည်သည့်ရန်ပုံငွေများဆုတ်ခွာခြင်းမပြုမီလောင်းကစားရုံအတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အချို့ slot နှစ်ခုအပေါ်အပိုဆုကြေး၏ 30x ဖြုန်းဖို့ရှိသည်. သင်တို့သည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံရှေ့တော်၌ထိုရန်ပုံငွေများကိုရုပ်သိမ်းပေးရန် အကယ်., သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အနိုင်ရရှိဆုကြေးငွေကိုဆုံးရှုံးရ. သင့်အနေဖြင့်အနိုင်ရရှိငွေပမာဏကိုမဆိုအမှု၌ငွေသားမှ 4x ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲလို့မရပါဘူး. အဆိုပါအာမခံသတ်မှတ်ချက်များတစ်ကာလအတွင်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်7နေ့ရကျ, အဆိုပါလောင်းကစားရုံသင်၏အကောင့်အတွက်ဆုကြေးငွေကိုပယ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ. အဆိုပါ အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် မြှင့်တင်ရေးအခမဲ့လှည့်ခြင်းများကိုယူ3အနိုင်ရအပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာထင်ဟပ်ဖို့ရက်ပေါင်း. အသက်ခိုင်လုံသောအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှသာလျှင် 18 နှင့်အထက်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည် အင်္ဂါနေ့ပွဲစဉ် မြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုကို.
အင်္ဂါနေ့ MATCH အတွက်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ